Hery - Tsiky dia ampy | Aogositra 2015 |
Fanafihana VIVA, tompon'andraikitra ny VIVA
2015-08-08 @ 22:32 in Politika
Mampalahelo tokoa ny mandre ny fanafihana, fangalarana, fanapotehana ny VIVA TV tany Fianarantsoa. Tahaka izany koa nampalahelo ny fanakatonana sy fangalarana ny fitaovan'ny Radio Fahazavana, ny MBS Radio sy TV, indrindra ny fandorana ny TVM sy ny RNM tamin'ny fotoan'androny. Mampalahelo foana rehefa fitaovana mahavokatra tsara ho an'ny Malagasy, na iza tompony na iza, no simbaina sy dorana. Satria anisan'ny voakasika amin'izany koa ny Malagasy mpanjifa, mpiasa, mpamboly, mpamokatra. Ny fanimbana ny Tiko Madagasikara ohatra dia nahavery asa fianakaviana maro. Ary hatramin'izao dia mbola tsy nisy nahasolo azy ny vokatra hita eny antsena.
Sary ao amin'ny site-n'ny viva
Rehefa dinihina anefa, amin'ny fo tsy miangatra sy tsy mandatsa, dia main'ny afo natsangany ihany ny mpiandraikitra ny VIVA. Toa ny fitaovana fanaovan-gazety rehetra dia tokony hanabe ny fiaraha-monina ny VIVA. Nivoana tamin'izany adidy masina tokony hiantsorohany izany anefa izy ka nanjary niandany tamin'ny herisetra sy fanimbàna zavatr'olona. Nisy ve, ohatra, ny fanamelohan'ny VIVA ny fandoroana ny MBS na ny RNM na ny TVM? Fanamelohana ny hetsika sy ireo izay nitarika izany? Ny fanamelohana tahaka izany mantsy dia fanabeazana ny mpihaino hahalala fa tsy fomba ny tahaka izany. Nisy ve ohatra, tamin'ny fotoanan'ny tetezamita, ny fiantsoan'ny mpanao gazety ao amin'ny VIVA ny hanokafana ireo radio sy televiziona nohidiana? Raha nisy dia mba tiako ho hita.
Koa tompon'andraikitra, na dia tsy mivantana aza, amin'izao zava-mitranga amin'ny VIVA Fianarantsoa izao, ny fanabeazana nentin'ny VIVA hatramin'izay, indrindra nandritra ireny korotandrotana teto amin'ny firenena ireny. Anatra ho an'ireo rehetra mihambo ho mpanao gazety izay manana adidy hanabe ny mpiray firenena aminy. Beazo ao anaty fandriam-pahalemana ny vahoaka dia handry fahalemana miaraka aminy ianao.
Petitions: araraoty fa mamaky Rajao
2015-08-07 @ 17:50 in Politika
Koa satria nitohy be ny resaka momba ny JIOI izay efa natsidiko tato omaly dia heno androany fa niantso ny mpifaninana rehetra hampitsahatra ny fandraisany anjara amin'ny Lalaon'ny Nosy eto amin'ny Ranomasimbe Indiana andiany faha-9 ny ao amin'ny Fiadidian'ny Filohan'ny Repoblika. Izany hoe ajanona daholo ny lalao dia manomboka miomana ny hody... fa tsy mody avy hatrany toa ny nataon'ny Comores. Mety hoe rehefa vita ny lalao rahafakampitso vao hotanteraka ilay fodiana... fa efa mba niantso aloha. Ny faniriana no tena zava-dehibe :-)
Fa manara-baovao ihany izany ny ao ambony ao koa araraoty ampitaina daholo izay vaovao manahirana rehetra. Anaovy petitions isan-karazany. Itaraino mihitsy.
Ireto aloha hatreto no tena mampimenomenona ny olona tao anatin'ny herinandro fa betsaka ny tahaka ireto:
Jiro tapaka efa ho intelo isanandro.
Voka-pifidianana ben'ny tanana teo voahodinkodina
Ny resaka SECES eny amin'ny oniversità sy ny Bacc
Ny grevy etsy sy eroa.
Araraoty ny mampakatra feo rehefa mihaino kely ilay mpanao be marenina.